“Fariin ayuu ii soo diray Ramos, balse marna uma….”.- Maxamed Saalax oo soo hadlay – Gool FM
“Fariin ayuu ii soo diray Ramos, balse marna uma….”.- Maxamed Saalax oo soo hadlay
Byare June 9, 2018
(Europe) 09 Juunyo 2018. Jariiradda Marca ee ka soo baxda Spain ayaa wareysi dheer la yeelatay Maxamed Saalax oo ku aadan, dhaawicii Finalka Champions League, Serigo Ramos, Koobka Adduunka iyo xulkiisa Masar.
Waxaan Wareysiga ka soo qaadanay qeybta uu uga hadlayo dhaawaca iyo dhibaatada uu Ramos u geytsay.
Maxamed oo markii hore la waydiiyay dhaawiciisa iyo inuu ciyaari karo kulanka koowaad ee Koobka Adduunka ayaa ku jawaabay:
“Iminka waan fiicanahay, waxaan rajeynayaa inaan ciyaaro kulanka koowaad ee Uruguay, laakiin midaa waxay ku xiran tahay sida aan dareemayo marka uu soo dhawaado.
Dhaawicii ku gaaray Finalka Champions League ma waqtigii kugu xumaa waayahaaga ciyaareed?
“Haa, waxay ahayd waqtigeygii ugu xumaa waayaheyga ciyaareed.
Ugu dambeyn waxaan kugu arki doonaa Ruushka, laakiin marna ma u cabsatay ka soo qeyb galkaaga koobka adduunka?
“Markii aan dhulka ku dhacay, waxaan qabay xanuun jir ahaaneed oo isku dhaf ah iyo walaac badan. Sidoo kale caro iyo murugo ah inaan awoodin inaan sii wato ciyaarista Final ka Champions League. Waqti yar kaddib waxaan sidoo kale ka fikirayay suuro galnimada aan ku ciyaari karin koobka adduunka, waxayna midaas ahayd fikir xun.
Wax badan ayaa laga yiri sida aad iskula dhacdeen Ramos. Ma aaminsan tahay inay ahayd mid caadi ah?
“Ma garanayo, Laga yaabee.
Ramos maalmo ka hor wuxuu yiri: “Si fiican ayaan u arkay ciyaarta, marka hore isaga ayaa iga qabsaday gacanta, waxaana u dhacay dhanka kale, xaqiiqdii wuxuu ka dhaawacmay gacanta kale.” Maxaad ka aaminsan tahay midaas?
“Waa wax lagu qoslo….”
Ramos wuxuu xusay: “Inaad ciyaari kartay qeybta labaad ee ciyaarta haddii Cirbad lagugu soo duri lahaa.”. Maku Raacsan tahay?
” Maxamed wuu Qoslay heheheheh’ waa caadi marka qofka markii hore kaa ooysiiyay uu misane kaa qosliyo. Laga yaabee inuu sidoo kale ii sheegi karo haddii aan diyaar u noqon doono koobka Adduunka.
Sergio Ramos fariin ayuu kuu soo diray….
“Fariin ayuu ii soo diray, Balse marna uma sheegin inay caadi ahayd.”.